Monday September 07, 2015 - 14:26:21 in Xiriirka Kubadda Laliska by Nocsom Editor
Munaasabada lagu iclaaminayay xilliga uu furmayo horyaalka kubadda a Laliska isla markaana qalab isboorti lagu guddoonsiinayay kooxaha xiriirkaas ayaa ka dhacday xarunta Gos , waxaana kasoo qayb galay , masuuliyiin ka soctay Guddiga Olombikada Soomaa
Munaasabada lagu iclaaminayay xilliga uu furmayo horyaalka kubadda a Laliska isla markaana qalab isboorti lagu guddoonsiinayay kooxaha xiriirkaas ayaa ka dhacday xarunta Gos , waxaana kasoo qayb galay , masuuliyiin ka soctay Guddiga Olombikada Soomaaliyeed, iyo madaxda Xiriirada, Ciyaaraha fudud, Kubadda Gacanta, Kubadda Laliska iyo Kooxaha ka qeyb galaya horyaalka.
Ugu Horeyn waxaa halkaas ka hadlay Xoghayaha Xiriirka kubadda laliska Maxamed Abuukar Xiireey(Liibero) , waxuuna sheegay in sanadkan uu horyaalka ay maal gelinayso Shirkaddda Jubba Airways oo kooxaha ugu deeqday qalabka ay sanadkan ku ciyaarayaan taasna ay ka mid tahay in dadaalka uu xiriirka ugu jiro in la helo shirkado garab istaaga xiriirka iyo kooxahiisa.
Xoghaha ayaa inta ku daray in horyaalka u furmi doono 12 September ayna ka qey gali doonaan 5 koox.
Madaxa Xiriirada Gos Xaaji Maxamed Axmed Colow oo xaflada ka hadlay ayaa ku amaanay xiriirka kubadda Laliska qaabka wanaagsan uu uga fakarayo kooxahiisa iyo sida uu uga caawinayo xagga qalabka taasna ay tahay tallaabo kudayasho mudan, waxuuna xiriirada kula dardaamay in ay dhankasta is garab siiyaan si loo hiigsado horumar.
Ugu damabyn waxaa xalfada ka hadlay guddoomiyaha Gos Cadbullahi Axmed Tarabi waxuuna xiriirka kubadda laliska ku amaanay qaabka ay juhdiga ugu bixiyeen in ay maal gelin u helaan horyaalka iyo kooxahiisa.
Guddoomiye Tarabi ayaa dhanka kale xusay in ay muhiim tahay in dhanka dugsiyada loo dhaqaaqo si loo helo ciyaartoy da'yar oo horumar samaynkara, waxuuna tusaale usoo qaaday ciyaartoyda xulka qaranka ciyaaraha fudud oo todobaadkan usafray dalka Congo oo ay uga qeyb galayaan all african Games dhamaan laga keenay Dugsiyada, waxuuna ugu dambayn xiriirka kula dardaarmay inay ballaariyaan shirkadaha maal gelinya xiriirka oo aysan hal shirkaad ku koobaan.
Horyaalka kubadad Laliska 28-aad oo furmaya waxaan ka qeybgalaya shan koox waxan kulanka furitaanka 12 September ku dagaalami doona kooxaha Dekedda iyo Feero.
W/D: Xuseen Maxaed Hadaafow